Cabdirashiid C / llaahi Xussein - Equal Access International
Cabdirashiid Cabdullaahi Xuseen
Agaasimaha Dalka, Kenya
Khabiir ku xeel dheer maaraynta barnaamijka iyo iskaashiga, Cabdirashiid Cabdullaahi Xuseen wuxuu leeyahay waayoaragnimo qarniyaal ah arrimaha bani’aadanimada iyo mashaariicda horumarinta bulshada oo uu u keeno xafiiska cusub ee EAI ee dalka Kenya.
Cabdirashiid Cabdullaahi Xuseen waa EAI u qaabilsanaha Kenya. Wuxuu ka soo shaqeeyay barnaamijyo kala duwan oo ka socda USAID si uu uga dhabeeyo waajibaadkooda Bariga Afrika. Xilliyadii ugu dambeeyay ee Adeegyada Tababbarka Horumarinta ee fadhigiisu ahaa Arlington, VA, Hussein wuxuu ahaa Bare Sare ee xagjirnimada rabshadaha wata. Wuxuu ahaa Maamulaha Sare ee Barnaamijka Adeso oo ah hay'ad samafal iyo horumarineed oo heer gobol ah halkaas oo uu ku hogaamiyay koox ka kooban 20 shaqaale maxalli ah oo ku howlanaa waxqabad ku saleysan lacag caddaan ah si loo yareeyo saameynta nololeed ee dadka ay abaaruhu ku habsadeen ee gobolka J / hoose ee Soomaaliya.
Xussein wuxuu jagooyin sare ka qabtay dowladda Kenya intii u dhaxeysay 2011 iyo 2016 gaar ahaan isagoo ka mid ahaa qorayaasha dastuurka hadda jira. Wuxuu sidoo kale ka shaqeeyey guddi ka baaraandega garsoorayaasha garsoorka laga soo bilaabo maxkamada sare ilaa maxkamada sare ee Kenya.
Hussein wuxuu ku qaatay shahaadada koowaad ee tacliinta sare jaamacada Kenyatta ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya, wuxuuna aaday jaamacada Rhodes University, Grahamstown, South Africa halkaas oo uu ka qaatay shahaadada masters of Arts ee taariikhda Africa. Wuxuu ka qalin jabiyay Master of Science oo ku takhasusay falanqaynta iyo xallinta machadka falanqaynta iyo xallinta khilaafaadka (oo hadda ah Iskuulka Falanqaynta iyo Xallinta Khilaafaadka) ee Jaamacadda George Mason, Fairfax, Virginia. Si aad ula xiriirto Cabdirashiid Xuseen fadlan emayl ugu dir info@equalaccess.org.